URamaphosa udalula imali ayisebenzisa emkhankasweni
UMENGAMELI we-ANC nezwe uMnuz Cyril Ramaphosa odalule ukuthi wasebenzisa cishe uR300 million ukukhankasela isikhunda sokuhola le nhlangano ngo-2017 Isithombe: Itumeleng English/African News Agency(ANA)
KUPHELILE ukuqagela ngezigidi zamaRandi ezasetshenziswa nguMengameli we-ANC nezwe uMnuz Cyril Ramaphosa, ngesikhathi ekhankasela ukuba ngumengameli we-ANC.
Izolo uRamaphosa uveze ukuthi umkhankaso wakhe wakuhola le nhlangano owawaziwa ngeCR17, wasebenzisa imali elinganiselwa kuR300 million, ukwenza isiqiniseko sokuthi uyawudla umhlanganiso engqungqutheleni yango-2017 eNasrec.
URamaphosa ukudalule lokhu ngesikhathi ephendula imibuzo kwikhomishini ephenya izinsolo zokulawulwa koMbuso yidlanzana.
URamaphosa utshele usihlalo wekhomishini, iJaji Raymond Zondo, ukuthi kungamampunge ukuthi kwasetshenziswa uR1 billion emkhankasweni wakhe.
URamaphosa uthe akusilo iqiniso ukuthi le mali yasetshenziswa ukuthenga amavoti engqungqutheleni eyayibhekwe ngabomvu.
“Kukhona amahlebezi athi ngathenga amavoti. Lokhu kungamanga aluhlaza. Lezi zimali zasetshenziswa ukusiza amagatsha e-ANC ukukhokhela izindawo zokwenza imihlangano, imali yokugibela ne-airtime yalabo ababeqhuba umkhankaso.”
URamaphosa uthe akazi ukuthi lezi zimali zanikelwa ngobani.
“Ngangingeyona ingxenye yabantu ababelawula ukusebenza kwalezi zimali. Ababephethe lo mkhankaso, bathatha isinqumo sokuthi ngingabi yingxenye yokuqoqwa kwezimali zomkhankaso, ukuze ngingabazi abantu abanikela emkhankasweni.
“Lokhu kwakwenzelwa ukuthi abantu abanikela kulo mkhankaso, bangalindeli ukuthi kukhona abazokuthola uma sengiqokwe ngaba ngumengameli.”
URamaphosa uthe akusiwo owakhe kuphela umkhankaso owawunezigidi zamaRandi.
“Nabanye abahlanu ababengenele lo mbango, nabo basebenzisa izindodla zemali.”
Lo mbango wokuhola i-ANC wawungenelwe nanguNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu, uDkt Nkosazana Dlamini Zuma, wuzakwabo kwezempilo uDkt Zweli Mkhize noNkk Lindiwe Sisulu, onguNgqongqoshe wezaManzi.
URamaphosa uvumile ukuthi lo mkhuba wokusetshenziswa kwezimali ukukhankasela izikhundla kwi-ANC, awumuhle.
Ubuiye wabuzwa ngokudembesela kwe-ANC ekuphenyeni izinsolo ngomndeni wakwaGupta, osolwa ngokuba ngongqondongqondo ekulawulweni koMbuso yidlanzana.
URamaphosa uthe ukuhudula izinyawo kwe-ANC ukuphenya izinsolo zokuthi lo mndeni wawunesandla ekuqokweni kongqongqoshe nezikhulu zezinkampani zikahulumeni, ngesikhathi kusaphethe uMnuz Jacob Zuma, kwadala omkhulu umonakalo.
Uthe kuyishwa ukuthi nakuba lezi zinsolo zaqala ukuvela ngo-2011, kodwa zaze zaqala ukuphenywa yiPhalamende ngo-2017.
“Ngiyavuma ukuthi iPhalamende kumele lenze okuthile uma kuvela izinsolo ezifana nalezi. Yinhlangano ebusayo okumele ithathe indawo yayo kuqala. Uma ihluleka kube sekungenela iPhalamende kodwa lidinga okungaphezulu kwezinsolo. Ama-email abakwaGupta aputshuka aba wubufakazi obungalandeleka.”
Uthe okwadala ukuthi kuthathe isikhathi eside ukuthi ziphenywe lezi zinsolo, yingoba kwakunokuphikisana ngaphakathi kwi-ANC ngezinsolo zokulawulwa koMbuso yidlanzana.
URamaphosa uthe ngisho namanje kwi-ANC kusenezinkulumo-mpikiswano ngezinsolo zokulawulwa koMbuso yidlanzana kuleli.
URamaphosa uzophinde avele phambi kwekhomishini maphakathi noMeyi, lapho esezovela engumengameli wezwe.